यस्तो छ नेपालीको गौरव : विक्रम संवतको वैज्ञानिक महत्त्व (भिडियोसहित) – Kantipur Hotline
काठमाडौं बैशाख १ , आजबाट विक्रम संवतको नयाँ वर्ष २०७७ शुरु हुँदै गर्दा ज्योतिषी दीपक सुवेदीले यसको वैज्ञानिक महत्त्वको बारेमा प्रकाश पारेका छन् । सुवेदीले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत सो कुरा बताएका हुन् ।
यसै सन्दर्भमा ज्यो. सुवेदीले विक्रम संवतको यसको वैज्ञानिकता छर्लङ्ग्याएका छन् । जसले गर्दा विक्रम संवतको बारेमा यसवीचमा उठ्दै आएको यावत प्रश्नको समेत दिदै विक्रम संवतजस्तो वैज्ञानिक संवत नेपालीको गौरवको विषय भएको बताएका छन । यसै क्रममा विषय विक्रम वैज्ञानिकता र महत्त्व ज्यो. सुवेदीले दिएको अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
वर्ष ०७६ को अस्ताउँदो सूर्य र वर्ष ०७७को उदाउँदो सूर्य..